🥇 ▷ 5 khiyaamo oo lagu guuleysto jinsiyadaha Fun Race 3D ✅
5 khiyaamo oo lagu guuleysto jinsiyadaha Fun Race 3D
Ciyaaraha Voodoo waxay sameynayaan Ogosto, weligoodna ma fiicna. Waa ciyaaro aan mararka qaar xitaa heysan heeso. Fudud, oo leh makaanikyo fudud oo si toos ah ugu yimaada shaqadooda: na soo dhowee saacado kooban. Laga yaabee inaadan cayaarin Funki Race 3D in ka badan todobaad, laakiin runti waxay noqon doontaa waqtiyo madadaalo ah. Magaca cinwaankanina wuxuu leeyahay awood ka badan inta ay moodeysay. Sidaa darteed, haddii aadan dooneynin inaad ku sii jirtid ama aad dhibaato ku qabtid inaad ku guuleysato tartamada, waxaan u diyaarinay maqaal leh 5 xeeladood oo kaa caawin doona waxyaabo badan kulankaan.
1. Ha iloobin iidhehda oo aad sugto
Mid ka mid ah dhibaatooyinka caadiga ah ee cayaaraha noocan ah waa xayeysiin. Waa habka ay abuurayaasha iyo soosaarayaasha cinwaanka ugu abaalmariyaan shaqadooda, iyagoo dakhli ku beddelanaya waqtigeenna iyo tixgelinta noocan oo kale ah xayeysiinta. Laakiin marka ay u muuqato si joogto ah, tartamid jinsi ka dib, waxay burburin kartaa qibrada ciyaarta. Xalku? Ku ciyaar qaabka diyaaradda.
Haddii aan dhaqaajinno nooca diyaaradda ka hor inta aanan bilaabin ciyaarista Fun Race 3D waxaan ka fogaan doonnaa dhammaan noocyada xayeysiiska. Dabcan, marka loo eego, waxaa nalooga tegi doonaa anaga oo aan helin fariimo iyo ogeysiisyo ka yimid dalabyada kale. Beddelka kale waa bixinta si meesha looga saaro xayeysiinta.
2. Choreography with timing
Yaanu ku khiyaanayn qaybaha mobilada ee tartanka ama ka soo horjeedda. Madadaalada Race 3D waxa kaliya ee muhiimka ahi waa waqtiyada. Xisaabi, cabbir oo xusuusnow goorta iyo intaad qasab ku noqonayso inaad riixdid shaashadda si aad u socodsiiso. Haddii aad tartan kula gasho, farsamadan ayaa kaa caawin doonta inaad ka adkaato ka dib dhowr isku day.
Sabir oo cabiro sekenka inta udhaxeysa carqaladaada. Tiri aamus haddii loo baahdo si looga gudbo marxalad kasta oo isir ah marxalad kasta. Ha walwelin haddii aad guuldaraysato ama aad weydo. Markaad ogaato waqtiyada qayb kasta waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad bilowdo riwaayadaha oo dhan Inuu noqdo kan ugu horreeya.
3. Iloobi kuwa kaa soo horjeedda
Haddii aad isku dayday inaad ku cayaarto qaabka diyaaradda waxaad ogaan doontaa in ciyaartoyda intiisa kale, oo u muuqda inay bini aadamku xakameynayaan, ay ka sii muuqanayaan ciyaarta. Wax aan macquul aheyn hadaan xirno isku xirka internetka. Hagaag, xitaa sabab intaa ka badan oo aan cadaadis dheeri ah loogu saari doonin kulamadeena. Iyagu waa bots, programmeysan, sidaa darteed iska ilaawo.
Talada wanaagsan waa inaad doorato midab kale ama naqshad dabeecadeed. Wax kasta oo ka dhigaya inay ka soo baxaan inteeda kale. Sidan, tartamada laba kale oo iska soo horjeedaa waxaad naftaada ka caawin doontaa inaadan ku mashquulin waxa kuwa kale sameynayaan. Xaqiiqdii, waa inaad fiirisaa baarka sare, kaasoo muujinaya horumarka orodka si aad u ogaatid sida aad uga baxeyso kooxaha ka soo horjeed. Cadaadiska oo yaraada, ayaa inta badan xoogga saarista waxa run ahaantii muhiim ah: tartanka.
4. Ka faa’iidayso shaashadda bilowga ah
Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay riix yar oo bilow ah oo tartan ah, ha ka laba labeynin eeg wixii ku soo socda shaashadda weyn ee ciyaarta. Haddaad eegto, caqabadaha ugu horreeya ee tartanka soo socda ayaa halkan lagu muujiyey. Ku filan in la ogaado waxa la sameeyo fidintaas.
Dabcan waa inaad xisaabisaa waqtiyada tixgalinta tirinteeda ilaa bilawga tartanka. Laakiin had iyo goor waa caawin in la isku dayo in laga faa’iideysto bilowga inta ka hartay. Ka faa’iidayso macluumaad kasta oo ciyaarta ay ku siiso inaad ku guuleysato.
5. Qaado gunnooyinka si deggan
Abaalmarinta Fun Race 3D waxay na siisaa kaliya qadaadiic si aan u iibsano astaamo loogu talagalay dabeecaddeenna ama qoob-ka-ciyaarka dabaaldegga ee markaan guuleysanno. Laakiin waa tan ugu qosolka badan waana mid ka mid ah ujeeddooyinka madadaaladaas daqiiqado kadib. Si aad lacag uhesho oo aad u iibsato waxkasta oo aad rabto waa inaad ku guuleysataa ciyaaro iyo sameyso inta badan heerarka gunnada.
Halkan khiyaanada ayaa ku jira Waqtigaaga dunida ku qaado. Baro caqabadaha kasta oo ka fikir si taxadar leh dhaqdhaqaaqa ka hor intaadan sameynin. Waqtigu adiga kuma tartamayo oo, haddii aad ku guuleysato inaad u kaxeyso saddexda xaraf ee aad ka dhigto dhamaadka tartanka waxaad ku dhufaneysaa qadarka qadaadiicda la soo aruuriyay. Marka si deggan oo leh heeso wanaagsan heerarka gunnada.